Rano fisotroan-dronona mahatsiravina sy manimba Reef Resilience
Ambony: Fipoahana avy amin'ny baomba nateraky ny fanjonoana hazakazaka any Pasifika Pasifika. Sary © Wolcott Henry 2005 / Lynn Funkhauser
Afovoany: Renirano rava noho ny fanjonoana. Sary © Wolcott Henry 2005 / Marine Photobank
Ambany: Trondro novonoina noho ny fanjonoana tany amin'ny vatohara any Thailand. Ny fanjonoana dia mety hamono trondro an-jatony. Sary © 2004 Berkley White / Marine Fotobank
Ny fanjonoana tsy azo ovaina dia fantatra amin'ny maha-be mponina indrindra amin'ny fandrahonana any amin'ny haran-dranomasina.ref Mihoatra ny 55% amin'ny haran-dranomasina eran-tany no atahorana hisambotra sy manimba ny fanjonoana. Ny faritra sasany, tahaka an'i Azia atsimo atsinanana, dia tena tandindomin-doza, izay misy ny 95% ho an'ny vatohara. Raha ny marina, maro amin'ireo vatoharan-dranomasina faratampony maneran-tany no tena voa mafy. ref Rano fisaka dia loharanon'ny sakafo sy fivelomana ho an'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka maro eran-tany. Amin'ny tranga sasany dia voaaro tsara ireo jono ireo ary mety ho loharanom-paharetana maharitra. Na izany aza, ny tahiry trondro dia increasingly threatened noho ny antony maro samihafa, anisan'izany ny fitomboan'ny fangatahana ny trondro sy ny vokatra avy amin'ny ranomasina; fomba fanjonoana mahomby kokoa; fitantanana sy fampiharana tsy mahomby; ary ny tsy fisian'ny safidy fivelomana. Ny fitrandrahana (toy ny fisamborana trondro hafa noho ny rafitra afaka manohana) dia mitarika ho amin'ny fihenan'ny isan'ny trondro, ny fiantraikan'ny tontolo iainana, ary ny fiantraikany amin'ny fiarahamonina miankina aminy. Ny fomba fanjonoana manimba dia manondro ny fampiasana baomba mba hamonoana na trondro trondro, izay manimba ny haran-dranomasina. Io fomba fanao io, izay antsoina hoe jono mitroka na manjono, dia manimba ny zanatanin'ny mpanjono ary mamono ireo vatohara any amin'ireo zanatany mifanila aminy. Satria voafetra ny fiparitahan'ny hazandrano any amin'ny haran-dranomasina, dia mety ho simba amin'ny faritra hipoka ny zana-tohatra madinika noho ny fipoahana miverimberina, mahatonga ny fahasitranana ho sarotra na tsy hitranga ary handrava faritra marobe. Ny fomba fanjonoana mahatsiravina hafa dia ny fampiasana cyanida mba hampitony sy hahazoana trondro velona ho an'ny trondro ara-tsakafo velona any an-dranomasina na orinasa trondro trondro. Ny cyanide izay voapoizina na voapoizina amin'ny vatohara dia mety hanimba sy hamono ny haran-dranomasina. Ankoatr'izay, ny mpanjono dia mamono ny vatohara matetika rehefa manandrana manipy ny trondro mipoaka, ka miteraka fahasimbana bebe kokoa amin'ny fiompiana harena an-dranomasina. Mampalahelo fa eo amin'ny iray ampahatelony ka hatramin'ny antsasaky ny trondro voaangona amin'ny fampiasana ity fomba ity no maty aorian'ny fambolena azy ireo, ref ka mahatonga azy io ho fomba iray faran'izay manimba ny fijinjana.
Ny fitaovan'ny mpanjono sasany, anisan'izany ny haran-dranomandry sy ny tora-pasika, dia mety hanimba ny tontolo iainana haran-dranomasina. Ireo karazana fanjonoana manjono ireo dia mitifitra eny amin'ny fanambanin'ny ranomasina ary manangona na manjavozavo ny karazana zazalahy sy ny vatohara tsy mifototra amin'ny làlany. Ny fitaterana an-jatony, toy ny fandrika fandrika na harato, dia afaka manohy "fisamborana ghost", izay midika fa manimba ny haran-koditra sy ny lozam-pifamoivoizana mandritra ny volana maromaro aorian'ny fametrahana azy. ref Ireo tambajotra tsy nahazoana alalana koa dia afaka manongotra sy manala ny vatohara noho ny fihetsika hetsika. Ankoatr'izay, ny fiankinan-doha sy ny hookah dia nanokatra faritra lalindalina kokoa ho an'ireo mpanjono sokatra goavam-be, mpitaingina pearl, orana, orita, hazandrano, kofehy ary vatohara. Ny fomba fanjonoana manimba toy ny dynamite, gill nets sy ny tora-pasika dia tena tsy azo ivalozana satria matetika izy ireo dia tsy mikendry manokana karazana trondro ary matetika dia miteraka zazakely maty ao anatin'ilay dingana. Ny fahavoazana amin'ny rafitra vatohara ho an'ny vatohara dia mampihena bebe kokoa ny vokatra ateraky ny faritra, ka miteraka ny vokatra azo avy amin'ny trondro azo avy amin'ny hazandrano ary koa ny fivelaran'ny mpanjono sy ny fokonolona manodidina.
Ny fiantraikan'ny fanjonoana sy fandrobana manimba
Havia: Mpihantona miasa mba hanaisotra ny sokatra amoron-dranomasina avy amin'ny tamba-jotra miala amin'ny morontsirak'i Brezila. Sary © Projeto Tamar Brezila / Marina Fototra Marina: Rivo-doza iray no reraka sy voageja amin'ny haraton'ny harato any Sabah, Malezia. Sary © Nick Coburn Phillips, Borneo Sharkarma / Marine Fotobank
Fandaniana mivantana ny trondro, tsy fahampian-tsakafo, ary algan'ny sakafo sy ny varotra akquarium
Famoahana karazana na karazana karazana fiantraikany amin'ny maro trophic levels
Fandraiketana sy fahafatesana eto an-tany tsy misy vina
Fanovana ny vatohara ho an'ny fanodinana algal noho ny fihenan'ny herbivore
Ny fiantraikany ara-batana amin'ny tontolo manodidina ny vatohara mifandraika amin'ny teknika fanjonoana, ny fanjonoana, ny fanjonoana ny fanjonoana ref
Ny fiantraikany toy izany dia mihamitombo rehefa miaraka amin'ny hafa kara-panaon'ny vatohara toy ny fiovaovan'ny toetrandro, ny aretin'ny vatohara, ary ny loharano voaloto ny tany. Maro ny tetik'asa fitantanana mba handraisana ny fanjonoana sy fanjonoana manimba dia nisy ny fametrahana ny faritra tsy misy toerana ao anatin'ny MPA, ny fialantsasatra amin'izao fotoana mba hiarovana ireo toeram-piompiana, ny fameperana ny isan'ny olona avela trondro, ny karazana mpanjono ampiasaina, ary ny habetsahana na ny haben'ny trondro azo alaina. Vakio bebe kokoa momba izany lapo-dranomandry.
International Coral Reef Initiative (ICRI) - Toe-karena sy tandindon'ny haran-dranomasina
Fandaharanasa momba ny harena voajanahary NOAA - Fialamboly tsy mahomby
ReefBase Resources sy Status - Fiarovana amin'ny tambajotra Global Coral Reef
Ny Vaomieran'ny Fitantanana ny Karibeanina
Gulf of Mexico Council Management Council
Ny Vaomiera Fitantanana ny Harena an-dranomasina Atsimo Atsimo
Fivoaran'ny Fitantanana ara-barotra ara-pizahantany any Pasifika